۩ शङ्कर लामिछाने स्मृति घर: माया नं ६५३
स्वास्थ्य विभागअन्तर्गत सन्तानोत्पत्तिशालामा शुक्रकीट सुरक्षित रहन्थे र सरकारी आदेशअनुसार नै उनलाई विकासी गरिन्थ्यो । तापक्रम-नियन्त्रण त्यस शालामा भावी कृषकदेखि डाक्टर, वैज्ञानिकसम्मको पूर्णनिर्धारित एवं नियोजित शुक्रकीट विभिन्न बोतलमा करोडौं सङ्ख्यामा सुरक्षित राखिन्थे । वैज्ञानिकहरुले सन्तानउत्पत्तिका प्रत्येक क्षेत्र एवं कार्यलाई वैज्ञानिक रूप दिई मानव नियन्त्रणमा राखिएका थिए - एक कुरामात्र उनीहरुले गर्न सकेका थिएनन् र त्यो थियो कृत्रिम गर्भाशयको निर्माण । अत: एक वर्षमा देशभरिका १२०० जननीपुणयुक्त नारी जन्माइन्थे र ती पूर्ण यौवनप्राप्त हुँदा तिनको गर्भाशय निकाली सरकारले आफ्नू सञ्चय बढाउँदथ्यो । बीसौं शताब्दीको अन्ततिर नै सरकारले यस विषयमा ठोस कदम उठाउनुपरेको थियो - त्यस बखतका नारीहरूको समानाधिकारको प्रबल मागले गर्दा । गर्भाधान एवं प्रसूतिको वेदनाबाट मुक्त हुन तथा पुरुषवर्गको समकक्षमा उनीहरुले काम गर्ने प्रस्ताव संसदमा राखी पास गराएका थिए । सरकारलाई कृत्रिम गर्भाधानको पद्धति विकास गरी सरकारी नियन्त्रणमा लिनुपरेको थियो । यसले बढ्दो जनसङ्ख्या एवं विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट पनि नियन्त्रित भएको थियो ।
अहिले २०५० का ती १२०० भाग्यमानी (वा मायाको भनाइअनुसार अभागी।) नारीहरुमध्ये माया नं ६५३ की थिई । उसको गर्भाशय निकाल्ने तिथि निश्चित भइसकेको थियो - अब ८ दिन मात्र बाँकी छ। तर...
उसको हृदयमा एउटा अनौठो भावनाको उदय हालै भएको थियो । नाचघर अथवा चियाघरमा कुनै पुरुषसँग अनायास नै उसको शरीर छोइँदा उसलाई एकतमासको सिरिङ्ग अनुभव हुन्थ्यो । त्यस पुरुषले 'माफ गर्नुस है' भन्दा ऊ चाहन्थी कि त्यस पुरुषबाटा 'हिंड्नुस् घुम्न जाऊँ' निस्कोस् । तर, त्यस प्रतीक्षामा नै उसका कति महिना बितिसके ।
उसले घडी हेरी। १६ बजेर ४० मिनेट गएको रहेछ । १९ बजे उसलाई अस्पतालमा पुग्नु छ । उसलाई पीर थियो, यस एक सातामा पनि के ऊ प्रकृतिको त्यस मार्गलाई पूर्ण नगरी त्यसै साधारण नागरिक बन्नेछ ? अहिले देशभरिमा भाग्यशाली (अथवा ऊजस्तै अभागी) ती १२०० पूर्ण नारी होलान्... तिनमा ऊ छे ६५३ औं ! ...१७ मार्चमा तीमध्ये एक नारी फेरि नारीत्वहीन हुनेछ १७ मार्च...!
अस्पतालबाट बाहिर निस्कँदा २० बजेको थियो । उसका ब्यागमा डाक्टरले दिएको रिपोर्टको एकप्रति र त्यसका साथ एक साताको दैनिक कार्यक्रमको रूपरेखा पनि थियो । उसले, अनि एक महिनामा बिदा पाएकी थिई - पहिलो साता अपरेशनअघिको स्वस्थता कायम राख्‍न, दोश्रो अपरेशनलाई, तेस्रो आरामी र चौथो भ्रमण एवं आनन्दको लागि - उसको दानको पुरस्कारस्वरूप । उसलाई चिन्ता थियो प्रथम साताको ।
"अघि तपाईंलाई स्वास्थ्य-निरीक्षण-गृहमा देखेको थिएँ, हो ?"
"तपाईं पनि ती अभागी १२०० मा हो !"
यस एक प्रश्नमा हाइड्रोजन बमको विस्फोट थियो - जसका अदृश्य तरङ्गमा आश्चर्य, आत्मीयता र सहानुभव लहरिंदै मुटुमा ठक्कर खाइरहे । मायाको आँखामा एउटा भीषण ज्योति चम्कियो, र उसको मौनले उसको प्रश्नकर्तालाई प्रश्नको उत्तर स्वत: प्रसारित गरिदिए ।
"तिम्रो नम्बर ?"
"६५३, मार्च १७, २०५० । तिम्रो ?"
"३४२, फरवरी २८, २०५० । म तिमीभन्दा जेठी रहिछु । तिम्रो दिदी !"
यो वाक्य अनायास मायाको मुखबाट फुस्क्यो - यसमा प्रश्न, प्रेम र खुशी मुछिएका थिए । कफीको सर्को लिंदै मायाले सोधी -
"उसो भए तपाईं अपरेशनपछिको भ्रमण-बिदामा, हो ?"
"अँ, तर मैले यस शहरलाई छाडेर अन्त जान मन पराइनँ !"
"तिम्रो अपरेशन बाँकी नै छ होला ?"
"तिमीले पूर्ण नारीजीवनको सदुपयोग त गर्‍यो ?"
प्रश्नको निर्भीकतामा माया झस्की । दिदीले कुरा पन्छाएर भनी -
"मलाई एलिजा भन्दछन् । तिमीलाई फुर्सद भए, हामी पार्कमा घुमौं न !"
दुबै बाहिर निस्के । एउटा बेन्चमा बसेर एलिजाले भनी -
"एक महिनाअगाडिसम्म यो पार्कमा बसेर यो चन्द्रमा र ताराहरुलाई हेर्दा मेरो मनमा कता-कता एउटा मीठो काउकुती लाग्दथ्यो । शायद तिमीलाई आजकाल भएजस्तो - हुन्छ ?" र एलिजाले मायाको हात समातेर बिस्तारै थिचिदिई ।
एलिजाले भनी - "सबभन्दा आश्चर्य त माया, मलाई यो लाग्यो कि त्यस बखतका नारी सहवासको निमित्त पुरुषबाट पारिश्रमिक पाउँथे । यस्तो कुनै व्यभिचारकेन्द्र हुन्थ्यो जहाँ..."
माया एउटा यस्तो स्वप्निल देशमा पुगेकी थिई जहाँ कसैलाई आफ्नो गर्भाशयको अपरेशन गराउन सात दिनपछि अस्पताल जानु पर्दैनथ्यो - जहाँ नारी पुरुषको स्त्री, सहगामिनी, स्वच्छन्द थिई । उनका कानमा एलिजाका अगाडिका वर्णन परेनन् ।
एलिजा भन्दै थिई - "आफ्नै शरीरको अङ्ग काँचको भाँडामा जिउँदो चलमलाइरहेको देख्दा मलाई कस्तो-कस्तो अनुभव भयो। अब एक महिनाभर त मेरो प्रथम पुत्र पनि हुन्छ - यस्तो पुत्र जसको प्रसवमा आमालाई कुनै वेदना, व्यथा हुनेछैन र साथै कुनै प्रेम पनि । यस्तो पुत्र जसकी आमालाई आफ्नू पुत्रको पिताको ज्ञान नै हुनेछैन । मैले... माया, तिमी पनि मजस्तै..."
"यता, श्री माया, पहिले तपाईंलाई शुद्ध पारौं! हामी स्वयं शुद्ध नभई बच्चाहरूको छेउमा पर्दैनौ ।"
मायालाई एउटा ठूलो बत्तीको मुनि उभ्याएर डाक्टरले स्वीच थिचे । त्यसबाट एउटा नौलो प्रकाश मायाको सर्वाङ्गमा पर्‍यो । डाक्टरले मायालाई एउटा सेतो एप्रोन लाउन दिए, भने - "हामी चाहँदैनौं बच्चाले झुक्केर पनि सधैं देख्‍ने नर्सभन्दा भिन्न आकृतिको नयाँ मानिस देखेको सम्झिरहोस् ।"
बच्चामा कुनै पनि मौलिकता मायालाई लागेन । उसलाई अनुभव भयो ऊ सधैंजस्तो डकुमेन्टरीमा देखाउने प्रसूतिगृहमा कुनै बच्चा हेरिरहिछ । उस्तै मोटो छ, उस्तै रूप । Ommentry को पङ्क्ति उसका मनमा सुरुसुर दोहोरिए- 'तपाईलाई विकसित गर्न ग्लैक्सोको ठूलो योग छ ।'
उसले अनायस सोधी - "यसको कागज एक फेर हेर्न सक्छु डाक्टर ?"
"किन नसक्नु, आउनुस् ।"
"धन्यवाद डाक्टर !"
Posted by Jotare Dhaiba at 8:52 AM